पोखराका मेयर किन पुगे भरतपुर ? - Pokhara News
पोखराका मेयर किन पुगे भरतपुर ?
पोखरा न्यूज७ असार २०७९, मङ्लबार
पोखरा । पोखराका मेयर धनराज आचार्य र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबारे जानकारी लिन आचार्यको टोली भरतपुर पुगेको थियो । दुई नगरबीच सहकार्यका लागि यसअघि नै भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ ।